Ngaba Sifanele Sahlukane? (Inxalenye 1) | Ulutsha Luyabuza
Ngamanye amaxesha kubhetele ukwahlukana. Khawuve nje okwenzeka kuJill. Uthi: “Ekuqaleni, ndandiyithanda into yokuba umfana endithandana naye esoloko efun’ ukwazi apho ndikhoyo, into endiyenzayo nabantu endikunye nabo. Kodwa ndandingasakwazi ukuchith’ ixesha nabanye abantu. Wayekhweleta naxa ndikunye nentsapho yasekhaya—ingakumbi uTata. Emva kokuba sahlukene, kwaba ngathi kuthe xibilili umthwalo omkhulu emagxeni am!”
Kwenzeka into efanayo nakuSarah. Wafumanisa ukuba uJohn, awayethandana naye unempoxo, kunzima ukumkholisa yaye ukrwada. USarah uthi: “Ngenye imini, wafika ekhaya kwiiyure ezintathu emva kwexesha esasilibekile! Xa uMama evula umnyango, akazange ambulise nokumbulisa, wasuka wathi kum: ‘Masambe. Sishiywe lixesha.’ Akazange athi, ‘Ndishiywe lixesha,’ kodwa wathi ‘Sishiywe lixesha.’ Ndandilindele ukuba acele uxolo okanye achaze isizathu sokuba afike emva kwexesha. Ngaphezu koko, wayemele ahlonele uMama!”
Noko ke, impazamo enye ayithethi kuthi olo lwalamano alunakuphumelela. (INdumiso 130:3) Kodwa emva kokuba uSarah ebonile ukuba uJohn ukrwada, wagqiba ekubeni bahlukane.
Kuthekani ukuba, umntu ubucinga ukuba lubambo lwakho akakufanelanga, njengoJill noSarah? Ukuba kunjalo, musa ukungayihoyi loo nto! Nakuba kunokuba nzima, kusenokuba bubulumko ukuba nahlukane. IMizekeliso 22:3 ithi: “Onobuqili ubona intlekele azifihle.”
Enyanisweni, kusenokungabi lula ukwahlukana. Kodwa umtshato liqhina elifanele lihlale lihleli. Kubhetele ukuva intlungu okwexeshana kunokuzisola ubomi bakho bonke!